GCM is the Gelatinase and Chitinase producing Microbe (Microbial fungicide and plant growth liquid fertilizer). It is manufactured by Purne Co.,Ltd, South Korea and MT is the sole authorized distributor for Myanmar.
It can control and prevent plant fungal diseases by producing gelatinase and chitinase enzymes, antibiotic compounds and plant growth hormone.
You can trust GCM for your crop yield.
GCM ဆိုသည်မှာ Gelatinase and Chitinase producing Microbe ကိုဆိုလိုပါသည်။ အဓိကပါဝင်သော Bacteria မှာ Lysobacter antibioticus ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းဘတ်တီးရီးယားမှ အင်ဇိုင်းများ (Gelatinase and Chitinase)၊ အပင်ကြီးထွားစေ သော ဟိုမုန်းများ (IAA & GAA)၊ ဘတ်တီးရီးယားရောဂါများကိုတွန်းလှန်နိုင်သော antibiotic (Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanorate) တို့ထွက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့ထဲမှ Gelatinase and Chitinase တို့သည် အပင်တွင်ကျရောက်တတ်သော မှိုများနှင့် နီမတုတ်ဥများ၏ cell wall အားချေဖျက် နိုင်သော အင်ဇိုင်းများဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင် Lysobacter antibioticus သည် အပင်ကြီးထွားကာ အထွက်နှုန်းတိုးစေ သော growth hormone များ နှင့် ဘတ်တီးရီးယားရောဂါကို သေစေနိုင်သော antibiotic ထွက်သောကြောင့် GCM တစ်မျိုးတည်းသုးံရုံ နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေပါသည်။ မြေဆီလွှာကိုလည်း အင်အားဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။
GCM သည် အပင်၌ဖြစ်သော မှိုနှင့်နီမတုတ်ရောဂါများကို နှိမ်နှင်းနိုင်သည်သာမက အပင်ကြီးထွားစေကာ သီးနှံအထွက်တိုးစေသော ဇီဝဆေးဖြစ်ပါသည်။အသုံးပြုနိုင်သောအပင်များ- မှိုရောဂါကျရောက်စေနိုင်သော သီးနှံပင်များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံပင်များနှင့် စားပင်မျိုးစုံ။သီးနှံပင်များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံပင်များအား ဆယ်ရက်မှ ၁၄ ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖျန်းပါ။ ကွမ်းပင်ဖျန်းပါက ကွမ်းခူးပြီးတိုင်းပက်ဖျန်းနိုင်ပြီး အထွက်တိုးကာ စားသုံးသူများအန္တရာယ်ကင်းစေပါသည်။
We can support the demonstration of GCM incubation for first user. We warmly welcome to offer any business collaboration in order to expand the market of our GCM products around Myanmar.
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ကာ လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘေးဥပါဒ်ကင်းစေသော ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ တွင် အောင်မြင်မှုများရရှိပြီးဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူ နှင့်စားသုံးသူများ အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ဖြန့်ဖြူးပါသည်။
( GCM သုံးစွဲ၊ဖြန့်ဖြူးရန်စိတ်ဝင်စားသူများအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။)